Zimbabwe's quality healthcare dream shapes up
Mon, 17 May 2021 Source: herald.co.zw
President Mnangagwa noted the commendable way Zimbabwe has contained the spread of coronavirus, performing considerably way better than some first world countries. The World Health Organisation (WHO) has praised Zimbabwe for its response.
As of Saturday, Zimbabwe had recorded 38 554 cases, 36 318 recoveries and 1 582 deaths. At the moment, there are indications that citizens from neighbouring countries are coming to receive the coronavirus vaccine given the general safety with the Chinese produced Sinopharm and Sinovac vaccines. Like all foreign residents, they have to pay the full cost of their vaccinations.
President Mnangagwa said the coronavirus pandemic had negative and positive effects, with the negative being the loss of loved ones while the positive being the acquisition of state-of-the-art machinery and medical equipment.